Ukuqunjelwa kwePulasitiki - Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
Inqubo yethu yokubumba umjovo epulasitiki ikhiqiza ama-prototypes angokwezifiso nezingxenye zokukhiqizwa kokugcina ngezinsuku eziyi-15 noma ngaphansi. Sisebenzisa isikhunta se-aluminium esinikeza ukusebenzisa okungabizi kakhulu futhi nemijikelezo yokukhiqiza eshesha.
Yini Ukujova Ukubulala:
Ukujova kwenaliti inqubo yokukhiqiza yokukhiqiza izingxenye ngevolumu enkulu. Isetshenziswa kakhulu ezinqubweni zokukhiqiza ngobuningi lapho le ngxenye efanayo idalwa izinkulungwane noma ngezigidi zezikhathi zilandelana.
Ngabe Umsebenzi Wokubumba Plastiki usebenza kanjani?
Inqubo yokubumba umjovo we-thermoplastic e-Protolabs inqubo evamile ebandakanya isikhunta se-aluminium ngaphandle kokufudumala noma imigqa epholile eledlula lapho, okusho ukuthi izikhathi zomjikelezo zide kakhulu. Ivumela ababunji bethu ukuthi baqaphele ukugcwaliswa kwengcindezi, ukukhathazeka kwezimonyo, kanye nekhwalithi eyisisekelo yezingxenye.
Ama-rein pellets afakwa emgqonyeni lapho ekugcineni azoncibilika, acindezelwe, futhi afakwe ohlelweni lokugijima lowubumba. I-hot resin idutshulwa iqonde emgodini wobumba ngamasango bese kuthi ingxenye leyo ibunjiwe. Izikhonkwane ze-ejector zenza ukuthi kususwe ingxenye yesikhunta lapho iwela khona emgqonyeni wokulayisha. Lapho ukugijima sekuqediwe, izingxenye (noma isampula lokuqalisa) zihlanganiswa ngamabhokisi bese zithunyelwa kungekudala ngemuva kwalokho.
ukukhiqizwa kwevolumu ephansi
Ezinye Izingxenye Zokufaka Umjovo Zepulasitiki
Ukubumba komjovo ubuchwepheshe obukhulu bokukhiqiza okuqedile ngezinga elikhulu. Kuyasiza futhi kuma-prototypes aqediwe asetshenziselwa ukuhlolwa komthengi kanye / noma komkhiqizo.
Izeluleko zokunciphisa izindleko
Qala ukubumba kokulimala
Idizayini yokubumba umjovo
Izinto zokubumba inaliti
Izinto ezisetshenziselwa ukubumba umjovo
Wonke ama-thermoplastics angafakwa umjovo. Amanye ama-thermosets nama-silicone e-liquid nawo ayahambelana nenqubo yokubumba umjovo.
Zingaqiniswa futhi ngemicu, izinhlayiya zenjoloba, amaminerali noma ama-fire retardant agents ukulungisa izakhiwo zazo zomzimba. Isibonelo i-fiberglass ingaxutshwa nama-pellets ngesilinganiso se-10%, 15% noma 30% okuholela ezingxenyeni ezinokuqina okuphezulu.
Ipulasitiki ejwayelekile kakhulu yokubumba. Ukumelana kwamakhemikhali okuhle. Amabanga aphephile ngokudla atholakalayo. Ayilungele izinhlelo zokusebenza.
I-thermoplastic ejwayelekile enokumelana okukhulu nomthelela, izindleko eziphansi nezinga eliphansi. Isengcupheni kuma-sol sol.
I-Thermoplastic engasindi ngokuqina okuhle nomthelela wesimo sezulu. Ilungele izinhlelo zangaphandle.
Ipulasitiki ebumba ipulasitiki ngenani eliphansi kakhulu. Amabanga aphephile ngokudla atholakalayo. Ayilungele izinhlelo zokusebenza.
I-Thermoplastic enamandla amakhulu wethonya nezakhiwo ezinhle zemishini nobulukhuni. Kufanelekile ukubumba izingxenye ngezindonga eziwugqinsi.
Ubunjiniyela be-thermoplastic enezakhiwo ezinhle kakhulu zemishini nokuphikiswa okukhulu kwamakhemikhali & abrasion. Iba khona umswakama.
Uplastiki onamandla amakhulu womthelela. Ukumelana okuphezulu kokushisa, ukumelana nesimo sezulu & nobunzima. Kungaba ngombala noma kube sobala.
Ukuhlanganiswa kwama-thermoplastics amabili okuholela kumandla amakhulu wethonya, ukuzinza okuhle kwe-thermal, nokuqina okuphezulu. Isengcupheni kuma-sol sol.